Nandritra io fotoana io ihany koa ny nisian’ny lalao ara-pirahalahiana eo amin’ny taranja baolina kitra tao amin’ny Stade de France, izay nifanandrinan’i Frantsa sy Alemana ka anisan’ny nijery izany ny filoha François Hollande. Tsy tafiditra tao kosa anefa ireo mpampihorohoro avy amin’ny fanjakana islamika izay voalaza fa nikotrika izany. Nandritra ny fankalazana io tsingerin-taona io omaly no nitokanana tsangambato fahatsiarovana miisa 5 tao Paris ka nitarika ny Filoha François Hollande. Mandrak’ankehitriny, mbola mitohy ny fikarohana ireo tompon’antoka tamin’iny asa fampihororohoroana iny na dia efa maro aza ny voasambotra.
Nampanginina ny raharaha ?
Noraisin’ny fanjakana an-tanana ny fikarakarana ireo tra-doza nandritra iny asa fampihorohoroana iny, indrindra fa ny fitsaboana ara-tsaina sy ara-moraly noho ny dona nahazo ireo olona marobe, hatramin’izao herintaona aty aoriana izao. Tsy mba toy izany kosa ny teto amintsika. Enim-bolana lasa izay, nandritra ny fotoana fankalazana ny fetim-pirenena no nisian’ny asa fampihorohoroana izay nahafatesana olona 2 sy naharatrana 84 hafa teny Mahamasina. Tsy nisy na iray minitra aza natokana ho fisaonam-pirenena. Tsy mbola nisy olona na iray aza voasambotra fa ny tranon’ireo olona maty indray no natao savahao. Ambetin-tenin’ireo tompon’andraikitra ny hoe efa mandeha ny fanadihadiana dia mijanona hatreo ihany. Nambara aza moa fa mety efa tafaporitsaka any ivelany ny tompon’antoka. Inona no tsy hamoahana ny anarany sy hanaovana didy fampisamborana iraisam-pirenena ? Toa hafenina ny marina na tsy mbola fantatra akory fa resabe sy fampandriana adrisa no betsaka.